नेकपा एकतामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई सबैभन्दा ठुलो चिठ्ठा ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
नेकपा एकतामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई सबैभन्दा ठुलो चिठ्ठा !
जेठ २ गते बिहिबार युवा संघको स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कार्यकर्ता सामु निराशाजनक कुरा सुनाए । उनले जेठ ३ गते नै नभनौ जेठ अन्तिम सम्म चाँहि एकता सकाउँने बताएका थिए ।
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगाएतका नेताहरुले पटक पटक जेठ ३ मै एकता सकाउँने बताउँदै आएका थिए । अन्तत जेठ २ मै नेकपा सचिवालयको बैठकले जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सह-संयोजक फाइनल गरेको हो । जसमा पूर्व एमालेलाई १६ र पूर्व माओवादी केन्द्रले ६ वटा जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व पाएका छन् ।
पूर्व माओवादी केन्द्रले पाएको ६ वटा जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व मध्ये ३ वटा त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकटका नेताले हात पार्न सफल भएका छन् । महिला संघकी अध्यक्ष अमृता थापा मगर, प्रेस संगठनका महेश्वर दाहाल र आदिवासी जनजातिका सुरेश आले बादल निकट मानिन्छन् ।
अनेरास्ववियुको अध्यक्ष चयन पनि नेताहरुका लागि पेचिलो बनेको थियो । पूर्व एमालेको भागमा परेको अनेरास्ववियुको अध्यक्ष नविना लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य भएलगत्तै संगठनको बैठकमा राजीनामा पेश गरेकी थिइन् । तर उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थिएन ।
नविना आफैं संयोजक बन्न इच्छुक थिइनन् । नविना लामा दोहोरिँदा क्रान्तिकारीका रञ्जित तामाङ सह-संयोजक बन्न तयार थिए । तर अध्यक्ष ओलीले लामाको विकल्पमा तत्कालिन महासचिव ऐन महरको नाम अघि सारे । तत्कालिन एमालेको अनेरास्ववियुमा अध्यक्ष नविना, चार उपाध्यक्ष र महासचिव ऐन महर सबै ओली निकट मानिन्छन् ।
नविनाको विकल्प छान्नुपर्दा ओलीले महर रोजे । नविना अखिलको उपाध्यक्ष हुँदा महर पनि उपाध्यक्ष नै थिए । नविना गुट परिवर्तन गरेर आफूतिर आएपछि ओलीले उनलाई अध्यक्षका रुपमा अगाडि सारे । त्यसबेला नै ऐनलाई अर्कोपटक अध्यक्ष बनाउने आश्वासनसहित महासचिवमा उठाइएको थियो । ओली सोही बचन पूरा गरेका छन् ।
अध्यक्षको दावेदारका रुपमा उपाध्यक्षहरु रश्मी आचार्य, महेश बर्तौला र सुनिता बराल थिए । तर संगठनमा महर सिनियर भएकाले उनैलाई अध्यक्ष बनाइएको ओली निकट स्रोतको दावी छ । पूर्वएमालेले पाएका १५ जनवर्गीय संगठनका संयोजमध्ये केपी ओली पक्षका ९ जना र माधव नेपाल पक्षका ५ जना छन् । बामदेव गौतमसहित ओली इतर समूहका ६ जना संयोजक भएका छन् ।